Instagram iri kuyedza shanduko yakakura muapp yayo | IPhone nhau
Instagram inoda zvakare kuve musoro wehurukuro kuitira kuti tirege kukanganwa kuti ichiripo zvakanyanya senge inowedzera kusimbiswa social network. Kuti uite izvi, unogona kunge uri kuronga kusunungura imwe yeshanduko yavo hombe kuapp kusvika zvino, kuchinja zvachose chimiro chatinoziva kwazvo.
Ipuratifomu iri kuyedza pakati pevamwe vashandisi vayo yakawanda minimalist Instagram, yakapusa pane zvemavara uye akajairika mitsara Kwete chisaririra chehunhu hwebhuruu toni yaizosara, nekuti zvese zvaizoitika kunge zviri chena kana nhema toni. Iwo ma ziviso, ehe, acharamba achive eimwe rumwe ruvara: orenji ichatsiviwa neyakawedzera pinkish toni.
Ini zvechokwadi ndinoifarira. Kunyangwe hachisi chinhu chinotishamisa zvakapfuuridza (sezvo chasvika padanho apo ese maApplication anogovera zvakajairika zvinhu), ini ndinozviona se shanduko inodiwa yekumutsiridza yechinyakare mufananidzo takanga tabva kuapp. Ehezve, sezvo ivo vachikurudzirwa kuisa "hombe" kugadzirisazve, ndinovimba iri pamatanho ese. Saka ikozvino isu tinofanirwa kuona kana neshanduko iyi ivo vanokurudzirwa kuti vagadzirise zvakare icon inofara, inova imwe yehuremu hunorema icho chikumbiro chave kudhonza kubvira iOS 7 (inoita senge zuro, asi kwete).
Izvo zvisiri pachena panguva ino ndezvekuti Instagram ichasarudza kuita shanduko iyi kusvika kune vese vashandisi kana kuti icharamba iri mupombi. Ini ndinobheja pane yekutanga sarudzo. Uye iwe, ungade here kuona iyi "nyowani Instagram" pane zviyero zvemidziyo yako? Iwe unogona here kuwedzera chimwe chinhu pane ino inogoneka yekuvandudza iwe yaungade kuwona muapp uye yauri kupotsa parizvino?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Instagram inogona kuburitsa imwe yadzo hombe kuvandudza chero nguva munguva pfupi
Tuco Benedicto Juan María Ramírez akadaro
Chinonyanya kukosha kugadzirisa irinyore shanduko yemuvara… Ichachinja internet !!!
Pindura Tuco Benedicto Juan María Ramírez
Ini ndaizounza shanduko inonakidza kwazvo pane kuravira kwangu: Sarudzo yekusarudza waunogovana navo pikicha yega yega yaunotumira Pamwe pane mapikicha aunoda kugovana nevateveri vako vese uye mapikicha aunofarira ayo chete akasarudzika anosarudzwa.
Zvizere bvumirana neizvi. Ndine pachena, chokwadi. Asi ini ndingadai ndichida "kudzora" mimwe mifananidzo kune vanhu chaivo ...
Zvakanaka, ndanga ndinaro muvara iwo kwenguva yakareba ...
Yakanaka Instagram iPad app inosvika riini?
Ndakave neichi chena interface kwemazuva mashanu kana matanhatu, asi hapana chitsva maererano nemashandiro.